You need a power plug adapter in Zimbabwe, when living in South Africa.
In Zimbabwe the power plugs and sockets are of type D and G. Check out the following pictures. When living in South Africa you need a power plug adapter for sockets type D and G.
In Zimbabwe the standard voltage is 220 V and the frequency is 50 Hz. You can use your electric appliances in Zimbabwe, because the standard voltage (220 V) is (more or less) the same as in South Africa (230 V). Manufacturers take these small deviations into account. So you don't need a voltage converter in Zimbabwe, when living in South Africa.